29 Ɛnna Hiob san toaa n’akasabebu no so sɛ: 2 “O sɛ anka mete sɛnea na mete kan asram no ɛ,+Nna a na Onyankopɔn hwɛ me so no;+ 3 Bere a ɔmaa ne kanea hyerɛn me ti so,Na mede ne hann nantew sum mu no;+ 4 Sɛnea na mete wɔ me mmabunberem,+Na Onyankopɔn ayɔnkofa wɔ me ntamadan mu no;+ 5 Bere a na ade nyinaa so Tumfoɔ no ka me ho,Na m’asomfo nyinaa atwa me ho ahyia no! 6 Bere a mitutuu m’anammɔn wɔ srade mu,Na ngo sen fii abotan mu sɛ asubɔnten maa me no;+ 7 Bere a mekɔɔ kurow pon ho,+Na mede m’agua sii abɔnten no!+ 8 Mmarimaa huu me, na wɔde wɔn ho hintawee;Nkwakoraa mpo sɔre gyinaa hɔ.+ 9 Akunini nso gyaee kasa,Na wɔde wɔn nsa too wɔn ano.+ 10 Akannifo nne hintawee,Na wɔn tɛkrɛma fomfam wɔn dodom.+ 11 Aso mpo tee, na ɛfrɛɛ me anigye,Na aniwa nso hui, na edii me ho adanse. 12 Efisɛ migyee mmɔborɔni a osu frɛ ɔboafo,+Ne agyanka ne nea onni ɔboafo.+ 13 Nea ɔreyɛ awu nhyira+—me so na ɛbae,Na memaa okunafo koma ani gyei.+ 14 Mifuraa trenee, na ɛkataa me ho.+Ná m’atemmu te sɛ atade nguguso ne abotiri. 15 Mebɛyɛɛ aniwa maa onifuraefo;+Na meyɛɛ apakye nso nan. 16 Meyɛɛ ahiafo agya;+Na nea minnim no no asɛm—mehwehwɛɛ mu.+ 17 Mibubuu ɔbɔnefo abogye,+Na migyee mmɔborɔni fii ne sẽ ntam. 18 Ná meka sɛ, ‘Me berebuw mu na megyaa mu,+Na me nna bɛdɔɔso sɛ anhwea.+ 19 Me ntini mu abue ama nsu,+Na obosu nso atena me baa so anadwo. 20 M’anuonyam yɛ foforo,Na agyan a ɛwɔ me nsam no, mɛtow no ntoatoaso.’ 21 Me na wotiee me; wɔtwɛn me,Na wɔyɛɛ komm maa m’afotu.+ 22 M’ano si a, wɔnkasa bio,Me nsɛm sosɔ guu wɔn so.+ 23 Ná wɔtwɛn me sɛnea wɔtwɛn osu,+Na wobuee wɔn anom maa osutɔ.+ 24 Meserew kyerɛɛ wɔn, na wɔannye anni,Na m’anim a ɛtew no,+ wɔammu no animtiaa. 25 Mepaw ɔkwan maa wɔn, na metenaa ase sɛ otitiriw;Metenaa ase sɛ ɔhene a ɔwɔ n’asraafo mu,+Meyɛɛ ɔwerɛkyekyefo maa wɔn a wodi awerɛhow.+